Askar Lagu Dilay Wilaayada Baay Iyo Bakool. – Calamada.com
Askar Lagu Dilay Wilaayada Baay Iyo Bakool.
calamada June 30, 2019 1 min read
Weerar shalay gelinkii dambe ka dhacay duleedka degmada Xudur ayaa sababay dhimashada 4 askari, sida uu soo sheegay wariye ku sugan gobolka Bakool ciidamada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa weerar gaadma ah ku qaaday maleeshiyaad isbaaro udhiganayay gaadiidka dadweynaha.
Idaacadda Andalus ayaa baahisay in weerarka lagu dilay Afar Askari islamarkaana sedax qori lagasoo qaniimeystay maleeshiyaadka weerarka lagu qaaday.
Previous: Qarax Askarta Shisheeyaha Lagula Beegsaday Shabeelada Hoose.
Next: Sheekh Abuu Usaama Oo Ka Hadlay Rayid Mareykanku Dilay Iyo Arrimo Kale Oo Muhim Ah.